Plato - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Plato bụ ọkàọmụ̀ma na ọdọ-mgbakọ na Greece Ogeègboo. Plato bụ nchoputavi nke Academy n'Atens, ewumewu mbu nke mmụta kacha elu na ụwa Ọdịdaanyanwụ , ọfọrọnta atụlewo ụwa-ni (ly) dika onye kasị mkpa na-ịzụlite nkàọmụma (philosophy), tumadu n’menala Ọdịdaanyanwụ. Ngbakọ-ede (canon) ya etisaghị ihe karịrị 2500 afọ-vo (s), na ọ bụ ya bụ achọghị ịzụ otu nke kasị ukwuu, ọ bụghị n'onye kasị ukwuu, ọdọ-ede nọ na ngbakọ-ede Ọdịdaanyanwụ dum .
Tinyere ọdọ-nkụzi ya, Socrates, na amụrụvi kasị ama, Aristotle, Plato tọrọ nnọọ ntọala nke nkàọmụma na nkàmmụta Ọdịdaanyanwụ. Alfred North Whitehead si otu mgbe kwuru: "nke kasị dịrị nchebe n'ozuzu ndona-agwa nke ọdịnala nkàọmụma Europe bụ na ọ na mejupụtara nsorosoro nke ededeala (footnote) maka Plato. " Tụkwasị n'ịbụ mmadu ntọala maka nkàmmuta Ọdịdaanyanwụ, nkàọmụma, na nkàmgbakọ (mathematics), ha tukwara Plato aka dịka otu n'ime mbidovivo nke ọnọdummụọ Ọdịdaanyanwụ, tumadu ọnọduKraịst, nke putara na Friedrich Nietzsche, n'etiti ndị ọzọ ọkà mmụta, kpọrọ "Platoomi ọha.’
Nrubeime Plato n’elu elulo Christian, ha cheworo na ọ gbugbowo (mediated) na nke metukachara Saint Augustine nke Hippo, otu n'ime ndị kasị mkpa ọkàọmụma Christian na ọdọ-okpukpe na-ogegaraga. Plato bụ ngbanwevi (the ‘vi’ stands for ‘er’ or ‘or’) nke Nkpakọrita na zizavo (forms), nkàechiche na nkàọmụma, nke sitere na ya. Plato bukwara nchoputavi nke nkàọmụma ndọrọọchịchị Ọdịdaanyanwụ , ya na Ọchiotutu (Republic), na Iwu n’etiti nkpakọritavo ndị ọzọ , na-enye ụfọdụ n'ime ndị mbụ agwọọrịa nke ajụjụvo ndọrọọchịchị ndị si na nkàọmụma anya-disi (perspective)
Plato bụ Atenvi nke ọmumu eze; ghọrọ amụrụvi Socrates. Ọ buwo nchekwube ọdọejije tupu ya abịa n'okpuru ndunihu Socrates, nakwa ọ ga-enye olu n’ọnwụ nke Socrates na-ejijeogi (dramatic) zizavo (forms) na Ngbahalu na Nkpakọrita yiriwo na isi oge kacha. E mesịrị, Plato jere ozi dị ka onye nkụzi nke Aristotle ihe karịrị afọ 20 tupu Aristotle putara ka ọ chọpụtara onwe ya ulọ-akwọ, Lyceum, nakwa ọ mmetụtakacha ọfọrọnta ulọ-akwụkwọ ọ bụla nkàọmụma Grik, na ndị Stoik, na Ọhurueplatovivo; ọzọkwa ikekwe ọ metukachara ha nile na elulo. Plato bụkwara onyenkụzi ọchigbovi nke Daịọnisiọs Syracusevi, na onye ọ nwara ikpe ihu ọma na-ahụ ka ọ mejuputa nkàọmụma okweizivo (principles) na omume, n'ihi na ọ dikwara emowo site Epicurus, onye kwuru si ọ dị ka "Dionysiokolakes", maọbụ ‘okwuireụtọvi nke ọchigbo’.
Ndị ọzọ n'oge bu ndi ilo nke Plato buwo Ngwooruvi (Materialist), Nkpurivi (Atomist) Democritus, onye ahaọma-ni Plato ledaworo ukwuu nke ọ ga-anakọta dị ka ọtụtụ n'ime ọrụ nwere ji kpọọ ha ọkụ, na Diogenes nke Sinope, ma ọ bụ Diogenes na Cynic, onye Plato na-akpọ "otu Socrates puwo ara", na onye, kọrọwo-ni, mgbe Plato gwara Diogenes na ọ gaghi eji aka ya asa onwe ya akwọnriba (salad) ma ọ bụrụ na ọ mụtara e nyewo Daịọnisiọs nsọpụrụ , zaghachiri na, ọ bụrụ na Plato mụtara na-asa ya onwe ya akwọnriba, ọ "ga-enweghị-abụ ohu nke Daịọnisiọs."
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=Plato&oldid=62036
Last edited on 11 Ọnwa ise 2018, at 18:17
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 11 Ọnwa ise 2018, mgbe 18:17